जान्नुहोस् ! के माछालाई पनि तीर्खा लाग्छ ?
जनवरी 18, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments तीर्खा, माछा
जान्नुहोस् ! के माछालाई पनि तीर्खा लाग्छ ? माछा पानीमा बस्ने एक प्रकारको जलचर प्राणी हो। माछाले पानीमै फूल पार्ने पानीमै बच्चा कोरल्ने गर्दछ । पानी सम्पूर्ण प्राणीलाई नभई नहुने चीज हो । त्यसैले हाम्रो शरीरबाट विभिन्न तरिकाबाट पानी बाहिर निस्कदा हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा कमी भई हामीलाई प्यास लाग्छ । तर, पानीमै सधैभरी बसिरहने माछालाई तीर्खा लाग्छ त ? तीर्खा लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर ‘प्यास’ शब्दको अर्थमा र माछाको वासस्थानमा भर पर्छ । यदि तीर्खा लाग्नु भनेको हामी मानव तथा जमिनमा बस्ने अन्य जनावरहरुको शरीरमा पानी कम हुँदा ‘पानी खान मन लाग्ने’ भावना हो भने मीठो पानीमा बस्ने माछाहरुको लागि शायद तीर्खा शब्द अर्थहीन हुन्छ किनभने शरीरमा पानीको मात्रा नियन्त्रणको लागि यस्ता माछाहरुले हामीले जस्तै पानी मुखबाट ‘पिउने’ गर्दैनन् । यिनीहरुको शरीरमा पानीको मात्रा नियन्त्रण अस्मोरेग्युलेसन नामक प्रक्रियाबाट हुन्छ । अस्मोरेग्युलेशन भनेको कम नुन भएको ठाँउबाट बढि नून भएको ठाँउमा पानी सर्ने प्रक्रिया हो । मीठो पानीमा बस्ने माछाको मृगौलाले युरिया नामक पदार्थको उत्पादन गर्छ । शरीरमा युरियाको मात्रा बढेपछि शरीर बाहिरको पानीभन्दा शरीरभित्रको पानी नूनिलो हुन्छ । यसैकारण अस्मोरेग्युलेशनको प्रक्रियाबाट पानी माछाको शरीरभित्र पस्छ ।
तर समुद्री माछाहरुको हकमा भने यो प्रक्रिया फरक हुन्छ । समुद्र आफै माछाको शरीरको पानीभन्दा निकै नूनिलो हुन्छ । यसै कारण माछाको शरीरबाट अस्मोरेग्युलेसन प्रक्रियाबाटै पानी निकै चाँडो बाहिर निस्कन्छ । त्यसैले समुद्री माछाहरुले पानी पिइरहनुपर्छ जुन काम उनिहरुले हामीले जस्तै मुखबाट गर्छन । तर समुद्रको पानी आफै नूनिलो हुन्छ भने त्यही पानी खाँदा माछाको शरीर पनि उत्तिकै नूनिलो हुनुपर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । यो सहि हो, तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम माछाको गिल्सले गर्छ । गिल्सले पानीमार्फत शरीरमा भित्र छिर्ने नूनलाई बाहिर फाल्ने काम पनि गर्छ । यस हिसाबमा भन्ने हो भने समुद्री माछाहरुलाई तीर्खा लाग्छ । यद्यपि यो हामीलाई लाग्ने जस्तो तीर्खा हुँदैन किनभने समुद्री माछाहरुको पानी खाने प्रक्रिया पनि हामीले सास फेरेजस्तै निरन्तर भइरहन्छ । यो यति निरन्तर हुन्छ कि केही छिनको लागि पानी नखाँदा पनि माछाको मृत्यु हुन सक्छ ।
← हृदयघातमा जीवनशैली परिवर्तन
बैज्ञानिक अनुसन्धानको पुष्टि ! तामाका भाँडामा राखिएको पानी पिउदा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने →
जुलाई 29, 2019 जुलाई 29, 2019 गोपाल भण्डारी 4